Osomabhizinisi abanasasasa ngosizo lwemali kahulumeni. USLINDILE KHANYILE uyabika - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Zisho kanje izinhlangano zosomabhizinisi iBlack Business Council (iBBC) neSMME Forum.
UMengameli weBBC uMnu u-Elias Monage uthe lolu sizo lwemali ebolekisayo olubizwa nge-Bounce-Back Scheme luzohluleka njengolwalusungulwe ngo-2020 i-Loan-guarantee Scheme.
“Lolu hlelo (iBounce-Back Scheme) luzohluleka ngenxa yezizathu ezimbili. Okokuqala, uhulumeni awuzange abonisane nathi (osomabhizinisi) ngendlela okufanele luhlanganiswe ngayo ukuze kungabi bikho muntu ovaleleka ngaphandle.
“Okwesibili, wukuthi uma (uhulumeni) ungalungisi lezi zinto ezenza ukuthi uhlelo lungaphumeleli kwakusekuqaleni, akukho okuzolunga,” kusho uMonage.
UMnu Monage, umengameli weBBC
Kuloku uhulumeni uhlinzeke uR15 billion kanti le mali osomabhizinisi bangayiboleka emabhange noma ezikhungweni zikahulumeni ezilekelela ngemali. Uhulumeni uzothwala izindleko eziwu-20% wokuqala ozocwila. Ngo-2020 kwakuhlinzekwe uR200bn kodwa wuR18bn kuphela owabolekwa njengoba kwavela ukuthi osomabhizinisi abanamdlandla wokwandisa izikweletu zabo.
“Amabhange anendlela yawo abuka ngayo izinto. Yize ecabanga ukuthi ayixegisile imigomo kodwa loko akubasizi abantu okufanele basizakale. Ukuze kube khona izindleko ezithwala omunye umuntu, kumele kube wukuthi abantu banomdlandla wokuboleka.
“Kunenqwaba yosomabhizinisi emalokishini nasemakhaya abanamabhizinisi asebenza ngokheshi futhi abangenawo ama-akhawunti asebhange kodwa banawo umlando wokuthi imali ingena futhi iphuma kanjani emabhizinisini abo. Kepha labo bantu abakwazi ukuboleka emabhange. Izikhungo zentuthuko zikahulumeni yigama nje ukuthi ziyathuthukisa, eziningi kuzona zisebenza njengamabhange futhi (inzalo) yazo ingaphezu kweyamabhange,” kukhala yena.
Inzalo umuntu azokhokhiswa eyimalimboleko enqunywe yiBhange loMbuso no-6.5% kanti ababolekisayo abavumelekile ukweqa kuyona.
Izinkampani ezivumeleke ukuboleka imali kulolu hlelo ezingenisa imali engeqi kuR100 million ngonyaka. Imali inkampani engabolekwa yona iqala kuR10 000 kanti ngeke yeqe kuR10m.
Isikhulu esiphezulu seSMME Forum uMnu uTebogo Khaas sithe nakuba luhlale lwemukelekile usizo olulethelwa osomabhizinisi abasafufusa kodwa ngathi kuloku uhulumeni usindwe yizinyawo.
UMnu uKhaas, isikhulu esiphezulu seSMME Forum
“Emva kodlame lwangoJulayi neCOVID-19 ngo-2020 kwaphela ngenqwaba yamabhizinisi emva kwezinyanga ezimbalwa, ngakho lolu sizo luzofica inqwaba yamabhizinisi engasekho ngoba ukuze umuntu asizakale kufanele kube wukuthi ibhizinisi lisekhona. “Labo abanawo amabhizinisi cishe igama labo alilihle ukukwazi ukuboleka imali futhi mhlawumbe ngeke babenomdlandla wokwandisa izikweletu abanazo. Uhulumeni uzothwala u20%, nokusho ukuthi lona omunye u-80% kumele uwuthwale wena,” kusho yena.